Rooble iyo Cali Guudlaawe oo war kasoo saaray qaraxii Beledweyne | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Rooble iyo Cali Guudlaawe oo war kasoo saaray qaraxii Beledweyne
Rooble iyo Cali Guudlaawe oo war kasoo saaray qaraxii Beledweyne
written by warsan radio 19/02/2022
Ra,iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa cambaareeyay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
“Waxaan cambaareynayaa qaraxii argagixisadu maanta ka geysteen Beledweyne oo ay waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay dad aan waxba galabsan.Waxaan u tacsiyeynayaa ehelada dadkii dhibtu gaartay. Allaha u naxariisto intii dhimatay, dhaawacyadana Eebbe ha bogsiiyo” ayuu ku sheegay war uu soo saaray Rooble.
Dhanka kale Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska qaraabada iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee ku naf waayay qaraxii bahalnimo ee Shabaab ay la beegsadeen Baar Xasan dhiif ee Magaalada Beledweyne.
Madaxweynaha ayaa amray laamaha kala duwan ee amniga inay xaqiijiyaan amaanka Magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar oo ay ka socdaan doorashooyinka Golaha Shacabka.
Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa Alle uga baryay Masuuliyiintii iyo shacabkii ku geeriyootay qaraxii argagixiso in uu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdowsa, inta ku dhaawacantayna uu Eebbe u boogo dhayo.
Rooble iyo Cali Guudlaawe oo war kasoo saaray qaraxii Beledweyne was last modified: February 19th, 2022 by warsan radio
Al Shabaab oo Fagaara Ku Yaalla Degmada Jamaame Ku Toogatay lix Qof
Midowga Yurub oo ku heshiiyay boqolaal bilyan oo wax looga qabanayo saameynta Covid-19.
Maxaa looga hadlayaa Shirka Golaha wadatashiga Qaran oo Muqdisho kasocda